फेरि रमाइलो मुडमा साथीहरुसँग प्रियंका कार्कीले गर्भावस्थाको फोटो हाले पछी आयो यस्तो प्रतिकृया,अब प्रियंकाले के गर्लिन ? भिडियो सहित | Rochak
September 4, 2021 NepstokLeaveaComment on फेरि रमाइलो मुडमा साथीहरुसँग प्रियंका कार्कीले गर्भावस्थाको फोटो हाले पछी आयो यस्तो प्रतिकृया,अब प्रियंकाले के गर्लिन ? भिडियो सहित
उनी अहिले ग,र्भअवस्थामा छिन् । उनको एउटा न एउटा फोटोले सामाजिक सञ्जाल त,ताई नै रहेको छ । धेरै फोटो हालेको त्यो पनि ग,र्भवती अवस्थामा भनेर धेरैले उनको ट्रो,ल समेत बनाउँदै आएका छन् । तर यी सबै कुराका बाबजुद पनि उनी आफ्नो मस्तीमा तल्लीन नै रहेकी छिन् ।